Mid ka mid ah xarumaha ciidanka NISA ee Muqdisho oo weerar khasaare geystay lagu qaaday – Balcad.com Teyteyleey
Mid ka mid ah xarumaha ciidanka NISA ee Muqdisho oo weerar khasaare geystay lagu qaaday
Qaraxan ayaa caawa fiidnimadii If you don’t want to spend too much money for your proscar, you should check our offer – proscar for only 1.46 USD! Sounds good, doesn’t it!? ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho kaasoo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka ee NISA oo degan xaruntii hore ee laanta Horseed oo ku taalla agagaarka Masjidka Cali Boolaay.
Sida dadka degaanka ay sheegeen qaraxan oo meelo badan laga maqlay ayaa loo adeegsaday bamka gacmeed iyadoo Ciidamada NISA ee degan xarunta bamka lagu weeraray ay rasaas aan la ogeyn in ay khasaare geysatay iyo kale ayey iyaguna ku jawaabeen, waxaana qaar ka mid ah Ciidamada NISA ay bilaabeen howlgalo ay ka sameeyeen xaafadaha ku dhow xaruntooda.
Ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada NISA ayaa ku dhaawacmay bamkaas sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Waaberi.
Howlgalada ay sameeyeen ciidamada NISA ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu soo qabqabtay dhalinyaro ka tirsan degaanka oo ay ciidanku ku tuhunsan yihiin iney qaraxaas ku lug lahaayeen inastoo qaarkood markii dambe la sii daayey.
Maleeshiyo taageersan kooxda Daacish oo lagu arday degmada Qandala
Mareykanka: ” Ciidamada Soomaalida waxaan ku sameyn doonaa tababar iyo qalabeyn”